သူတို့ သူတို့…. သူတို့ – Min Thayt
စာပေနဲ့ အနုပညာအလုပ်ဟာ လူတွေရဲ့နှလုံးသားကို ညှို့ငင်ပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့နှလုံး သားကို ညှို့ငင်ပြီး လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်လို့၊ အနုပညာ ဖန်တီးသူဟာ နှလုံးသားအရည်အသွေးလိုတယ်။ နှလုံး သားအရည်အသွေး နိမ့်တဲ့လူဟာ စာပေ အနုပညာကို ဖန်တီးရင် ရေရှည် မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ ရေရှည် မပေါက် မြောက်နိုင်ဘူး။ လူအများရဲ့ နှလုံးသားမှာ ရေရှည် မစွဲထင်နိုင်ဘူး။ လူတော်တော်များများရဲ့ နှလုံးသားကို အား ကောင်းပြီး ဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားကသာ ဆွဲငင်နိုင်လိမ့်မယ် ထင်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် စာပေနဲ့ အနုပညာအလုပ်ကို လုပ်တဲ့သူဟာ နှလုံးသား အရည်အသွေး တော်ရုံနဲ့ မရဘူး။ မြန်မာပြည် ရဲ့ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ဂီတနယ်ပယ်တွေမှာ အခုအချိန်ထိ ထင်ပေါ် ပေါက်ရောက်နေတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ၊ ကို လေ့လာကြည့်တယ်။ လူသေပေမယ့် အခုအချိန်ထိ နာမည်မသေသေးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေအားလုံးမှာ တူတဲ့ အချက်ရှိတယ်။ အဲဒါက သူတို့လုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ် ရိုးသားတာပဲ။ သူတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာ သူတို့ ဖန်တီးရဲ့ အနုပညာမှာ ကျောက်ချထားတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့ဟာ အမြဲတမ်း ကွန့်မြူးနေတယ်။ နောက်ထပ်တွေ့ရတဲ့ အချက်က ကိုယ့်ပညာကို ကိုယ်တန်ဖိုးထားတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကို ကိုယ်ချစ်တယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ဖြစ်ကတတ်ဆန်း မလုပ်ဘူး။ သေချာလုပ်တယ်။ ဂရုတစိုက်လုပ်တယ်။ စေတနာထားပြီး လုပ်တယ်။ တစ်နေ့ထက် ပိုပြီး ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်။ သူတို့ဟာ အဟောင်းမှာချည်း ရပ်မနေဘူး။ အသစ်ကို ဖန်တီးသည်။ အသစ်ကို ပေးတယ်။ သမားရိုးကျအတိုင်း မလျှောက်ဘူး။ ဖောက်ထွက်ပြီး လုပ်တယ်။ ကွန့်မြူးတယ်။ ဖန်တီးတယ်ဆိုတာ သူတို့အမြဲတမ်း လုပ်နေကြတယ်။ ဒါတွေကို တွေ့ရတယ်။
ပိုပြီးကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ ဆိုရင် စေတနာထည့်ထားရုံနဲ့ မပြီးသေးဘူး။ လေ့လာမှ ရမယ်။ လေ့လာမှဖြစ်မယ်။ မလေ့လာရင် ပိုကောင်းအောင် မလုပ်နိုင်ဘူး။ လေ့လာရင်လည်း စေတနာက သန့်ပစေ။ တချို့ စေတနာက မသန့်ဘူး။ ငွေကြေးကို အဓိပတိထားတယ်။ ငွေကြေးကို အဓိကထားပြီး စဉ်းစားလုပ်ရင် အရည်အသွေးကောင်း တာတော့ ရလာမယ်။ ရေရှည်တည်တံ့တာ မရနိုင်ဘူး။ လူတွေရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာ အမြဲတမ်း စွဲကျန်ဖို့ ခက် တယ်။
ပြီးတော့ စာပေ အနုပညာဟာ တစိုက်မတ်မတ် ရှိမှ။ အမြဲမပြတ် လေ့လာနေမှဖြစ်တယ်။ မလေ့လာရင် ကန်းသွားတယ်။ လေ့လာမှု နောက်မှာ အမြဲတမ်း လေ့ကျင့်မှုက လိုက်ရတယ်။ ဖန်တီးမှု၊ လေ့လာမှု၊ လေ့ကျင့် မှု၊ တစိုက်မတ်မတ် ရှိမှု၊ စိတ်စေတနာဇော ထက်သန်မှု…. ဒါတွေက စာပေအနုပညာအလုပ်မှာ အရေးကြီး တယ်လို့ ထင်တယ်။ စိတ်အာရုံဟာ အစဉ်အမြဲ စာပေ အနုပညာမှာ ကျက်စားနေကြတဲ့သူတွေဟာ ပေါက် မြောက်ကြတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေဟာ ပရိတ်သတ် လိုချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ကျော်ကြားချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ ငွေကြေး လိုချင်လို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဩဇာတိက္ကမကြီးဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ နောက်လိုက်မွေးဖို့လည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ အလုပ်ကို သူတို့ချစ်လို့ လုပ်နေကြတာ။ သူတို့အလုပ်ကို လုပ်နေရင်း သူတို့ ပျော်နေကြ တယ်။ လုပ်ပြီးရင်လည်း သူကျေနပ်တယ်။ ထပ်ပြီး လုပ် ဆက်ကာ ဆက်ကာ လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ သူတို့ရဲ့ အာရုံကျက်စားမှုဟာ သူတို့ကျက်စားတဲ့ အနုပညာမှာ အမြဲတမ်း အာရုံကျနေတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူတို့ ပေါက်မြောက် အောင်မြင်ကြတာဖြစ်မယ်။ သူတို့ အနုပညာဟာ သူတို့ သေဆုံးကွယ်လွန်သွားပေမယ့်၊ အမြဲတမ်း ရှင်သန်နေတယ်လေ။
ညနေ ၅း၂၀
၆ ၊ ၉ ၊ ၂၀၁၉
Previous post အလံတော်အောက်က နေ့စွဲများ
Next post တည်နေရာ ရန်ကုန် ငပိရည် အက်ဆေး